अर्थमन्त्री « Janata Samachar
खतिवडाको चर्चा छायाँ अर्थमन्त्रीमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमित डा.युवराज खतिवडा सरकारको छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा रहिरहने चर्चा चलेको छ । खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुन: मनोनित गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने चाहना पार्टी निर्णयका कारण पुरा हुन
अर्थमन्त्रीमा खतिवडा नदोहोरिने पक्कापक्की
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि त्यो केवल चचार्मा मात्रै सिमित हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई पुनः मन्त्री बनाउने कसरत गरिरहनु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा चलिरहे पनि नेपालको संविधान अनुसार उहाँ पुनः मन्त्री बन्न नमिल्ने देखिएको छ । संविधानमा कुनै व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र
अर्थमन्त्रीले भन्नुभयाे- ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ
छलफलमा सांसदहरुले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको आग्रह– माननीयहरु चकलेटमा नलागौँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा करका विषय चुहावट भएको भए छानविन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ माथिको सामान्य
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुँदासम्म यथावत रहने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको अनुसूचीमा ३
आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश, वृद्धिदर खुम्चियो
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीलाई पत्रकारको प्रश्न– शेयरले तपाईलाई नरुचाएको हो ?
काठमाडौं । सरकारले मास्कको अपूर्ति र उत्पादन बढाउने विषयमा नीति क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको बताएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को प्रभाव नदेखिएको बताउँदै सरकारले संक्रमण हुँनै नदिने गरी उच्च
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी वृद्धि र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले औद्योगिक कानुनमा सुधार गरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लाइमेट रिर्फम इन नेपाल’ सम्बन्धी परामर्श
प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीकाे लज्जास्पद हार